Heerka Ammaanka Difaaca oo Kor loo Qaadey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Heerka Ammaanka Difaaca oo Kor loo Qaadey
La daabacay måndag 4 juni 2012 kl 15.38
Heerka darajada ammaan ee wasaaradda difaaca ayaa kor loo qaadaey iyada oo laga qaadey heer hooseeyey lana gaarsiiyey heer sare, iyadoona la gaarsiiyey heerkii ciidanka nabad-sugiddu hore u gaarsiiyeen heer-kulka ammaanka dalka sannadkii 2010. Middaasina oo ay ka dambeeysey digniin uga timid xarunta qaranta ee qiimeeynta firfircoonida falalka argagixisada (NTC).
Laanta ammaanka iyo war-doonka ee ciidammada qalabka sida (MUST) ayaa si joogta ah u qiimeeya heerka ammaan ee ciidanka difaaca. Iyadoona lagu saleeyo tusaale ahaan kor u kaca howlaha basaasnimo, dembiyada, howlo curyaamin iyo falal argagixisnimo. Iyadoona dhowaantan dib u eegid lagu sameeyey xaaladda la xiriirta falalka argagixisnimo.
Go'aankan ayaa sidoo kale lagu qiimeeyey isku-dayaddii wax-yeelooyin ee goobaha milateriga ee yurub la isku dayey. Sida tii sannadkan horraantiisii lagula kacey ciidankii faransiiska ee magaalada Toulouse.